Otú Nkịta Si Anụ Ísì Ihe | È Kere Ya Eke?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Bashkir Basque Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kabuverdianu Kannada Khakass Kikamba Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maya Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Okpe Oromo Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Tongan Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Yoruba Zulu
Otú Nkịta Si Anụ Ísì Ihe
Nke a na-egere egere Họrọ ụdị nke ị ga-ewere Otú Nkịta Si Anụ Ísì Ihe
Ndị na-eme nchọpụta kwuru na nkịta na-eji imi ha amata ihe ụfọdụ gbasara nkịta ndị ọzọ. Dị ka afọ ndụ ha, otú obi dị ha nakwa ma hà bụ oké ma ọ bụ nne. E nwedịrị ike ịzụ nkịta ịna-achọpụta ebe bọmbụ ma ọ bụ ọgwụ ike dị. Ndị mmadụ na-ejikarị anya ha achọpụta ihe ndị na-eme gburugburu ha, ma nkịta na-eji imi ha. E nwere ike ikwu na ha na-eji imi ha ahụ ụzọ.
Ihe ị ga-echebara echiche: Otú nkịta si anụ ísì karịrị nke mmadụ okpukpu okpukpu. Otu ụlọ ọrụ dị n’Amerịka kwuru na nkịta nwere ike ịchọpụta na e tinyere ihe dị ka nnu ma ọ bụ shuga dị ezigbo obere na nnukwu mmiri. Dị ka ihe atụ, e tinye shuga na ngaji e ji e nye nwatakịrị mmiri, kee ya ụzọ anọ ma wụnye otu ụzọ n’ebe a na-egwu mmiri, nkịta ga-achọpụta na shuga dị ná mmiri ahụ.
Gịnị mere otú nkịta si anụ ísì ji kara nke mmadụ mma?
Imi nkịta na-adị mmiri mmiri, nke a na-eme ka o nwee ike ịna-anụ ísì ụmụ irighiri ihe.
E nwere oghere abụọ dị n’imi nkịta. Otu bụ maka iku ume, nke ọzọ abụrụ maka ịnụ ísì. Nkịta maa ihe imi, ikuku na-abanye n’akụkụ imi ya nwere ihe ndị na-eme ka ọ na-anụ ísì.
Ebe nkịta ji anụ ísì n’imi ya karịrị nke mmadụ
Ihe ndị yiri akwara dị n’imi nkịta o ji anụ ísì ji okpukpu iri ise karịa nke mmadụ.
Ihe ndị a niile na-enyere nkịta aka ịchọpụta ihe dị iche iche dị n’otu ísì ọ nụrụ. Dị ka ihe atụ, anyị nwere ike ịnụ ísì ofe, ma ụfọdụ ndị ọkachamara kwuru na nkịta nụ ya, o nwere ike ịmata ihe niile e ji sie ofe ahụ.
Ndị na-eme nchọpụta n’otu ụlọ ọrụ na-eme nchọpụta gbasara ọrịa kansa kwuru na imi nkịta na ụbụrụ ya na-arụkọ ọrụ ọnụ. Nke a mere ka ha bụrụ “otu n’ime ihe kacha mma e nwere n’ụwa e ji anụ ísì ihe.” N’ihi ya, ndị sayensị na-emepụta ngwá ọrụ elektrọnik ga na-anụ ísì ha ga-eji na-achọpụta bọmbụ, ahịa iwu, nakwa ọrịa, dị ka kansa.
Gịnị ka i chere? Otú nkịta si anụ ísì ihe, ọ̀ nọkatara dịrị? Ka è kere ya eke?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Otú Nkịta Si Anụ Ísì Ihe
ijwwd isiokwu 6